Nke a bụ ọmarịcha nlegharị anya foto ọhụụ FSX Ọdụ ọdụ ụgbọ elu KJFK na-eji ụdị mbipụta ọhụrụ ADE (v01.50.11) & SBuilderX tool design. Agbakwunyere ọhụụ, ụgbọ elu ụgbọ elu nke New American ụgbọ elu na Jet Blue, ebe a na-adọba ụgbọala, ọtụtụ ụlọ nkwakọba ihe, na ọtụtụ nkwalite ndị ọzọ mara mma iji mee ka o nwekwuo mmetụta.
Ịdenye na unregistering nke mma bụ akpaka gị simulator. -Aga n'ebe nanị tinye KJFK na ubi "Airport ID".
Onye edemede: Glenn Johnson